My tiny world: यो झरी !
यो झरी !
ए झरी नझरी देऊ यसरी
एकान्त यो रातमा मलाई पा
अनि ? सायद यसपछिको वाक्य गुन्जाउन थालिसक्नुभएको हुनुपर्छ ।
झरी देऊ तिमी सुस्तरी सुस्तरी
जब हुन्छिन् मेरी मायालु मेरो वरिपरि
लौ यत्ति मात्रै । किनभने आज हामी यो गितको हैन, गीतसँग ठ्याक्कै मिल्ने प्रसंगबारे यसैका गायकसहित केही सेलिबि्रटीसँग गफिँदै छौं । सो
च्नुस्, झमझम पानी प
रिरहेको सप्तान्तको मध्याह्न तपाईं आफूले मन परेकै कोहीसँग यही झरीको गफ गर्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईंसँग छिन चल्तीकी हिरोइन केकी अधिकारी । 'यो गीत त,' कफीको चुस्कीसँगै केकीको कुरा सुनौं, 'झरी पर्नेबित्तिकै गाइहाल्न मन लाग्छ ।' केकीको झरी अनुभव क्या गज्जबको छ भने, सुनिरहौं लाग्ने ! बालापनकै कुरा गरौं । उनी उल्कै रुज्थिन् । 'निथ्रुक्कै बनेर,' थप्छिन्, 'घर पुगिन्थ्यो ।' काठमान्डुको बौद्धक्षेत्रतिर हुर्किएकी उनलाई धेरै पानीमा भिज्नुको आनन्दले रोगप्रतिको भयमा कत्ति पनि बढोत्तरी ल्याउँदैनथ्यो ।
त्यसैले कहिलेकाहीँ बिरामी हुन्थिन्, बेडमा थला पर्थिन् । 'अनि त,' झमझम पानी परिरहेको यो बेला आकाशामा मडारिइरहेका बादलतिर हेर्दै उनी बोल्छिन्, 'त्यत्ति रुज्नै डर लाग्न थाल्यो ।'
ल्ाौ हुर्किंदी केकी जसै म्युजिक भिडियोतिर मोडलिङ गर्न तम्सिइन् उसैगरी झरीले
जादू गरिदिएको छ उनको यो करिअरमा । केही अघिको एउटा अचम्मको घटना सुनौं । शिव परियारको एउटा गीतको म्युजिक भिडियो सुटिङमा पानी परेको सिन चाहिन्थ्यो । लौ कसरी गर्ने होला ? उनको टिम सोल्युसन खोज्दै थियो । केकीले आकाशतिर हेरेकीमात्र के थिइन् । 'ह्वार्रै पानी दर्कियो,' हाँस्दै सुनाउँछिन्, 'क्या जादू नै भइदियो !'
ओ माई गड, हाउ रोमान्टिक यार ! के सबैले चाहँदैमा यस्तै होला ? 'असम्भव,' लौ एस कुमारलाई भेटौं, 'चाहनेबित्तिकै पानी दर्किने भए त
भगवान् नै भइहालियो नि !' भगवान्ले सिर्जेको यो संसारका सबै मान्छे उस्तै हुन्, भेदभाव नगरौं भन्दै गीति अभिव्यक्ति दिँदै अघि बढेका यी नयाँ पुस्ते गायक झरीमा निकै रोमाञ्चक बन्छन् । यसले उनको सिर्जनात्मक क्षमता बढाउँछ रे ! 'बाटोमुनिको फूल' बाट आफूलाई अब्बल नायकका रूपमा स्थापित गराइसकेका यी संगीतकारले ८ वर्षअघि आफ्नी प्रेमिका -हो
र ? 'रचना गर्नका लागि ट्राजेडीमा परेजस्तो गर्‍या,' उनी मुस्काउँछन्) सँगको बिछोडमा औधि नमीठो अनुभूत गरे रे ! 'मध्यरातमा म टोलाइरहेको थिएँ,' भन्छन्,'अकस्मात् पानी पर्‍यो ।' जुरुक्क उठेर बाहिर निस्कें । वाउ क्या कुल मौसम !
धेरै वर्षपछि आज फेरि त्यस्तै झरी पर्‍यो
तिमीलाई नै सम्झेर हो
कि हाँस्दा-हाँस्दा हाँस्दै आँसु झर्‍यो
वा क्या बात छ यार ! अहिले यो गीत वियोगीहरूबीच औधि लोकपि्रय छ । र, उनी आफैं यो गीत सुन्दा भावुक मात्रै बन्दैनन्, झरीमा निथ्रुक्कै भिजेजस्तो ठान्छन् आफैंलाई ।
'झरीको झमझम सुन्दै रोमान्टिक उपन्यास पढ्दाका आनन्दै बेग्लै' उनी उत्साहित बनिरहेका छन् । टेबलमा रहेको ब्ल्याक कफीको चुस्कीको आनन्द नै बेग्लै । 'झरीको बेलामा मलाई हार्ड गरेर
ब्ल्याक कफी मनपर्छ,' उनी थप्छन्, 'झरीसँगै मातिन पाएको छैन । कफी जतिको मजा त के आउला ?'
अब कुरा सुनौं अनु शाहको । 'युगदेखि युगसम्म' बाट रजटपटमा उदाएकी अनुलाई झरीले नयाँपन र खुसीको महसुस गराउँछ । झरीको बहकाउमा बगेर स्कुटरमा सहर चहार्न रुचाउँछिन्, उनी । 'झरीसँगै गीत सुन्दा आनन्द नै बेग्लै । मोबाइलको एयरफोन कानमा लगायो अनि बाइकमा सरर ।' हल्का भिजिरहेको आँखा झरी बजि्ररहेको सडकतिर तेस्र्याउँदै उनले भनिन् । अहिले भिज्ने कि ? 'हा हा हा अँ त्यस्तै लागिरहेछ । वाउ
मलाई भिज्न क्या मजा लाग्छ ।'
रिमझिम झरीमा बेस्सरी भिज्नुभएको छ ? छैन भने अनुलाई सुन्नुहोस्, 'स्कुटरमा हाफ टिसर्ट र जिन्स पाइन्टमा बेस्सरी भिजे,' हालैको झरी अनुभव सुनाउँदै बोल्दैछिन्,
'क्या मजा आयो । भिज्दाभिज्दा पछि त निकै जाडो पो भयो भन्या ।' अनुलाई रात्रि समयमा पर्ने झरीले निकै आनन्दित बनाउँछ । 'रात्रिको झरीले सिरकभित्र स्वर्गीय आनन्द नै प्राप्त हुन्छ,' हल्का मुस्काउँदै अनुभव साट्दैछिन् उनी, 'दिउँसोको झरी भने रोमान्टिक र हेरिरहुँ लाग्ने ।' तपाईं झरीलाई छल्न छाता वा रेनकोटको जोहो गर्दै हुनुहुन्छ होला हैन । 'मलाई कहिल्यै रेनकोट बोक्न मनै लाग्दैन, रेनकोट बोक्यो भने भिज्नै पाइँदैन' उनी भन्छिन् । झरीमा म:म र तातो सुपको आन
न्द लिन रुचाउँछिन् उनी । 'रेस्टुरेन्टमा माथिल्लो तलामा बस्यो, झरी हेर्‍यो । तातो सुप सुरुप-सुरुप । कफीको चुस्कीको मजा त झन् बेग्लै ।'
समरका यी दिनहरूमा मात्तिरहेको झरीसँग रहँदा 'ए झरी नपरिदेऊ यसरी...' गीत याद आएको हुनुपर्छ । त्यही गीतका गायक नवीन के भट्टराईलाई लामो झरीको यो मौसममा सात वर्ष अगाडि रेकर्ड गरिएको यो गीतलाई धेरै पटक गुन्गुनाउन भ्याइसके । 'तीन दिनदेखि झरी परिरहेको छ । म झ्यालबाट झरीलाई नियाल्दै यही गीत गुन्गुनाइरहेको छु,,' हालैको एक साँझ हेलो शुक्रबारसँगको कुराकानीमा उनले भने । उनलाई झरीले पागलै त पारिहालेको छैन । तर अनौठो र अजीवको अनुभूति भने सधैं गराइरहन्छ । 'मायालु त आजभोलि सधैं वरिपरि,' उनी भन्छन्, 'यसो झरीको मजा लिन सडकमा निस्कियौं भन्यो काठमाडौंका सडक नै गतिला छैनन् ।'
झरीबारे गफिरहँदा नवीन आफ्नो टिनएजतिर र्फकंदै छन् । पुतलीसडकको स्टुडियोहरूबाट गीत रेकर्ड गरेर र्फकंदा झरीसँग सिँगौरी खेलेको विगत निकै रमाइलो छ । 'पुतलीसडकबाट घरसम्म निथु्रक्क भिजेर हिँडेको दिन म कहिल्यै भुल्दिन ।' प्रेयसी छेवैमा राखेर ट्राभलिङ जान मन लाग्दैन ? 'न राम्रो मोटरबाटो छ न त कुनै त्यस्तो सुविधासम्पन्न गन्तव्य जाने कता हो,' नवीन भन्छन् ।
सुन्दरता झरीसँग किन गाँसिएको होला ? केकी बोल्दैछिन्, 'फ्रेस गराउँछ, सुन्दर देखाउँछ त्यसैले होला ।' 'मलाई साथीहरूले भिजेको बेलामा कति सुन्दर देखिएको भनेर कमेन्ट गर्छन्,' अनु थप्दैछिन्, 'झरीले नारी सुन्दरतालाई झल्काउँछ । आकर्षक र सुन्दर देखाउँछ ।' सेक्सी र सुन्दर देखाउँछ हो ? प्रश्न एस कुमारतिर सोझिँदैछ । 'अँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ।'
लन्डनमा थ्री डब्लु अर्थात् वर्क, वुमन र वेदरको भर हुन्न भन्ने त उखानै छ । त्यहाँको मौसम यस्तो छ कि कुन बेला के हुन्छ पत्तो नै हुन्न । फेरबदल भइरहने मौसमले पूर्वानुमानसमेत असफल सावित भइदिन्छ कहिलेकाहीँ त । त्यसो भए झरीमा सेलिबि्रटी वा आम समुदाय के गर्लान् ? यो समय बिताउन बेलायतीहरू पव वा रेस्टुरेन्ट पुग्छन् । सामान्यतया साँझ घरमा खाना बनाउँदैनन्, उनीहरू बरु बजेट छैन भने कम खान्छन्, तर पव वा रेस्टुरेन्ट गएकै हुन्छन् । यो त त्यहाँको कल्चर नै हो । तर नेपालमा न त लन्डनको जस्तो मौसम छ न त कल्चर नै । त्यसैले नेपाली सेलिबि्रटीहरू संगीत सुन्छन्, गीत र कविता, लेख्छन्, उपन्यास पढ्छन् र टे्रकिङ निस्कन्छन् । झरीलाई झन् कसैले मिस गर्नै चाहँदैन । झरी सडकमा बजि्रन्छ, टेलिभिजन र रेडियोमा बज्छ, मोबाइल र आइपडमा गुन्जिन्छ ।
यी सेलिबि्रटीजस्तै तपाईंलाई पनि मादक झरीले मोहनी लगाउँछ होला है । के-के न गरूँजस्तै । झरीले बिर्सिएकी प्रेमिकालाई सम्झाउँछिन् । यादहरू सगिलिन्छन् । हाम्रा गायकहरू यहीँ गाउँछन् । हाम्रा अभिनेताहरू यही अभिनय गर्छन् । हाम्रा गीतकारहरू यही रचना गर्छन् । त्यसैले, यो झरीले हरेकमा सिर्जनात्मकता जन्माओस्, झरीको शुभकामना !
असार २३ गतेको कान्तिपुर दैनिकको परिशिष्टांक हेलो शुक्रबारमा प्रकाशित फिचर
Posted by mytinyworld.blogspot.com at 4:06 AM